तीन म्युचुअल फण्डले कसरी कमाए नाफा ? | गृहपृष्ठ
Home लगानी तीन म्युचुअल फण्डले कसरी कमाए नाफा ?
on: April 26, 2019 लगानी
वैशाख १३, काठमाडौं (अस) । शुक्रवार चैत मसान्तको विवरण सार्वजानिक गरेका तीन म्युचुअल फण्डले नाफा कमाएका छन् । ति योजनाले फागुन मसान्तको तुलानमा सूचिकृत शेयरमा लगानी बढाएका छन् भने एनएभि पनि बढाएका छन् ।
एनएमबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालन भएको एनएमबि हाइब्रिड फण्ड – १ ले रू. ५ करोड ५४ लाख कुल आय गरेको छ । योजनाले फागुन मसान्तमा रू. ४ करोड ३६ लाख कुल आय गरेको थियो । योजनाले रू. ७ करोड १४ लाख आम्दानी गर्दा रू. १ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ । योजनाले लाभांशबाट रू. ४ करोड ६३ लाख आम्दानी गरेको छ भने रू. १ करोड ६३ लाख आम्दानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । योजनाले विभिन्न कम्पनीमा ६ लाख ४९ हजार ६८८ कित्ता शेयरमा रू. २६ करोड ५१ लाख लगानी गरेको छ ।
दोस्रोमा एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड – १ ले चैत मसान्तमा रू. ३ करोड ६८ लाख कुल आय गरेको छ । योजनाले फागुन मसान्तमा रू. २ करोड ६ लाख कुल आय गरेको थियो । योजनाले रू. ५ करोड २७ लाख आम्दानी गर्दा रू. १ करोड ५८ लाख खर्च गरेको छ । योजनाले लाभांशबाट रू. ३ करोड ६ लाख आम्दानी गरेको छ भने रू. १ करोड ८ लाख आम्दानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । योजनाले विभिन्न कम्पनीमा ९ लाख ९६ हजार ६९४ कित्ता शेयरमा रू. ४० करोड ९२ लाख लगानी गरेको छ । माथिका दुवै योजनाको व्यवस्थापक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
तेस्रोमा सानिमा म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित सानिमा इक्वीटी फण्डले चैत मसान्तमा रू. ९ करोड १५ लाख कुल आय गरेको छ । योजनाले फागुन मसान्तमा रू. ६ करोड ६१ लाख कुल आय गरेको थियो । योजनाले रू. ११ करोड ६१ लाख आम्दानी गर्दा रू. २ करोड ५४ लाख खर्च गरेको छ । योजनाले लाभांशबाट रू. ५ करोड ५५ लाख आम्दानी गरेको छ भने रू. ३ करोड ५ लाख आम्दानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । योजनाले विभिन्न कम्पनीमा रू. ५८ करोड ६७ लाख लगानी गरेको छ । योजनाको व्यवस्थापक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेण्ट-१ को धितोपत्रमा लगानी ४.८८ प्रतिशत बढी
सानिमा इक्वीटी फण्डको कुल आय १५ करोड
सानिमा इक्वीटी फण्डको कुल आय ६ करोड
सानिमा इक्वीटी फण्डको कुल आय ५ करोड